In ka badan 45,000 oo Maxbuus ah oo Barlamaanka Turkiga u codeeyey in la sii daayo - Awdinle Online
In ka badan 45,000 oo Maxbuus ah oo Barlamaanka Turkiga u codeeyey in la sii daayo
April 14, 2020 (Awdinle Online) –Barlamaanka Dowladda Turkiga ayaa maanta oo Talaado ah u codeeyeen in 45,000 oo Maxbuus la sii daayo, sababo la xiriira Faafista Xanuunka COVID 19, oo ay u nugulyihiin Maxaabista.
Xildhibaanaddo ka tirsan Xisbiga Madaxweyne Erdogan ee AK Party iyo kuwa Xisbiga Waddaniyiinta ee MHP ayaa taageeray Mooshinkaasi lagu fasaxayo Maxaabiista dambiyada fudud.
279 Xildhibaan oo ka mid ah 600 Xildhibaan ee Barlamaanka Turkiga ayaa u codeeyey Go’aankaasi, halka ay 51 Xildhibaan ka soo horjeesteen go’aankaan wasaaradda Cadaallada dalkaasi horgaysay Golaha sharci dajinta Turkiga.
Gudoomiye ku xigeenka Barlamaanka Turkiga, Sureya Sadi Bilgij ayaa sheegay in uu Sharcigaasi dhabaha u xaari doono in si Ku-meel-gaar ah loo sii daayo 45,000 oo Maxaabiis.
Dhinaca kale, Wasiirka Garsoorka ee dalkaasi, Cabdixamiid Guul waxa uu shalay xaqiijiyey in 17 Kiis oo COVID 19 laga dhex helay Maxaabiista oo ay 3 ka mid ah u geeriyootay.
Waxa uu intaasi ku daray in 79 Maxbuus iyo 80 Garsoorayaal, Dacwad-oogayaal iyo Baarayaasha Maydadka laga helay xanuunka dunidu la tacaalayso ee COVID 19.
Shalay, Tirada dadka Turkiga ugu geeriyootay COVID 19 waxay gaartay 1,296 qof, iyadoo Kiisaska la xaqiijiyey ay gaareen 61,049 qof.
Si kastaba ha ahaatee, Xabsiyadda Turkiga waxa ku xiran Ku-dhawaad 300,000 oo Maxbuus, waxaana ku yaalla Xabsiga Labaad ee ugu weyn Xabsiyadda ku yaalla dalalka Europe, Maxaabiista ayaa u badan kuwa lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen Shir qool xilka looga tuuri rabay Madaxweyne Erdogan.
Qiyaastii 1.92 milyan oo dad ah oo adduunka ku nool ayaa la xaqiijiyay in ay qabaan cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ sida laga soo cad xogta ay soo aruurisay Jaamacadda Johns Hopkins. In kabadan 119,500 ayaa dhintey, halka ku dhawaad ​​450,000 ay soo kabsadeen xanuunka.
Previous articleAl-shabaab Oo Soo Bandhigay Hub Iyo Meydadka Askar :-(Sawiro)
Next articleMadaxweyne Waare “Ilaa Dhinac Noo Dhaafo Coronavirus Doorasho Uma Soo Jeedno”